Horseed Oo U Dhawaatay Hogaanka Horyaalka – Radio Muqdisho
Horseed Oo U Dhawaatay Hogaanka Horyaalka
Kooxda Kubada Cagta Horseed adkaatay Kulankii ugu horeyay horyaalka Soomaaliya Kadib Sadex kulan oo aysan wax guul ah gaarin kooxda Ciidanka Xooga 4-0 ayeey ugu adkaatay Kooxda Kubada Cagta Batroolka kulan adag oo ka dhacay garoonka Banaadir ee degmada Cabdi Casiis.
Horseed waxay u dhaqaaqday kaalinta labaad ee kala horeynta Horyaalka Soomaaliya kadib marki Shalay Galab ay ka gashay kooxda Banaador oo adkaatay kulankeedii 12-aad.
Batroolka Waxay ku Sii Sugnaan doonto kaalinta 7-aad ee Horyaalka Soomaaliya.
Kulanka berito ee ugu danbeeya wareega 12-ka ayaa waxaa soo gaba gabeyn doono kooxaha Heegan iyo Madbacadda.
Madbacadda FC Todobadkii la soo dhaafay waxay la ciyaartay kooxd Horseed oo matasha Ciidanka Xooga Todobaadkan waxaa ay Mar kale is hayaan Koox kale oo Ciidamada qalabka Sida matasha Waa Heegan oo Matasha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Kulanka Madbacada ay Soo Ciyaartay Todobadkii tagay ayeey barbaro 1-1 ku heshiiyeen kooxda Horseed balse Madbacada waxaa loo taagay labo kaarka casaanka ah oo garoonka la isaga Saaro Taasi ayaana Sabab u noqon doonto in ay weyso Kabtan Cabdi Kariin Boqori iyo Lambarkii 11-aad ee kooxdaasi Waxaana ay noqon doontaa laba xidig oo muhiim ah in kooxda ay weyn doonto.
Heegan waxay barbaro la soo gashay kooxda Banaadir oo ay isku haysteen kaalinta labaad wallow kooxda heegan ay dhibic ka hooseysay Banaadir Waxaana ay ku guul dareysatay in Heegan ay ka adkaato Banaadir dabadeedna ay ka sare marto.
Heegan iyo Madbacada kulankii Wareegii hore waxay ku kala baxeen barbaro 0-0 ah ayadoo kooxda Madbacadda kulamadii ugu danbeyay ee ay Ciyaarto kooxdaasi ay ahayd Mid Taako u dhigeysay kooxaha Waa Weyn.
Wareegii hore ee horyaalka Soomaaliya kooxda Madbacadda Waxay barbaro ku celisay Kooxo fara badan oo ku fikirayay in si fudud ay u dhaafi doonan kooxda Madbacadda hase yeeshe kooxaha ugu awooda badan horyaalka Soomaaliya ayaanan u suurta gelin in ay dhaafaan kooxda Madbacadda.
Kooxaha Jenyo Horseed iyo Heegan oo isugu Xigay Wareegi hore ayeey kooxda Madbacadda dhamaan ka wada saftay Barbaro, Kooxda Jenyo oo la ciyaartay kulankii ugu horeyay ee horyaalka Soomaaliya xili ciyareedkan wareegii hore ayeey ku Celisay Barbaro 1-1 kulan ka dhacay garoonka Banaadir ee degmada Cabdi casiis Tariikhada markii ay ahayd 25/01/18.
Kulankii labaad ee horyaalka soomaaliya ayeey Madbacadda ka hor timid kooxda Ciidanka xooga ee Horseed waxaana ay u diiday Horseed in sida Jenyo oo kale shabaqa ay soo Taabato waxaana ay ugu diirtay 0-0, Kulankii Sadexaad Waxay la Ciyaartay kooxda Heegan oo kulanka Soo Socda ay Wada balansan yahiin sidoo kale Waxay Marsiisay Wadadii Horseed oo Waxaa uu ku soo idlaaday 0-0.
Wareega Labaad oo dhowaan bilowday ayeey Madbacadda Mar kale Waxay is arkeen kooxaha Jenyo iyo Horseed oo barbaro ay ku soo celisay wareegi hore, balse Wareegi labaad ayeey marsiisay wadadii wareegi hore oo ah barbaro.
Wareegi hore kooxaha Waa weyn ee horyaalka Soomaaliya waxaa ka adkaaday Madbacadda kaliya kooxda Elman oo garaacday markii ugu horeysay Banaadir oo kulankii xigay garaacday iyo Dekadda oo dejiye u daartay Madbacadda kadib markii 7-gool laga dhaliyay.
Dhamaan kooxaha waa weyn oo ay ka hor tagtay Madbacadda wax guul ah kama gaarin waxaana inta badan wareegi hore ay ku celisay barbaro
Haatan kooxaha Waa Weyn Laba ayeey La Soo Ciyaartay wareega Labaad Waxaa u haray ilaa iyo afar kale oo ay la ciyaari doonto.
Madbacada 11 kulan oo ay ciyaartay horyaalka dalka waxay adkaatay hal kulan oo quraa balse waxaa ay haysataa Rikoorka barbaraha ugu badan ee horyaalka Soomaaliya xili Ciyareedkan Lix kulan ayeeyna barbaro gashay.
Banaadir Sadex dhibcood ayeey u jirsatay hogaanka horyaalka premier league kadib markii ay ka adkaatay kooxda waxool oo sidoo kale ayana la kulantay guuldaradii 8-aad horyaalka premier league Somalia laba 12 kulan oo ay ciyaartay waxaana waxool kooxda guuldarooyinka ugu badan la kulmay horyaalka soomaaliya dhamaan tobanka kooxod ee u tartamaya.
Banaadir waxa ay u dhaqaaqday kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka soomaaliya oo Horseed ay ku jirtay booskaasi balse kulan uu baaqi u yahay.
Kaasi oo ay la ciyaari doonto kooxda Madbacada oo ayada sidoo kale booskeedii sideedaad ay gashay kooxda Gadiidka.
Kulankii Galabta ay wada ciyareen kooxaha Banaadir iyo Waxool ayaa badalay Natiijada kala horeynta sadexda kooxod ee ugu sareysa Horyaalka Soomaaliya Kadib markii Kooxda Banaadir 2-0 ay ugu adkaatay Waxool, Natiijadaas ayaa Banaadir u sahashay in ay kaalinta labaad horyaalka ka gasho kooxda Horseed taasi ayaana dhibaato ku ah kooxda Horseed ugu yaraan hadii barbaro lagu celiyo ama laga adkaado.
Madbacadda Sidoo kale Natiijadii kooxaha Gadiidka iyo Jenyo ayaa sababay in kooxda ay u degto booska labaad ee ugu hooseya ee loogu laabto horyaalka heerka labaad kadib markii Gadiidka 6-3 ay ugu adkaatay waana markii labaad oo guul ay gaarto gadiidka horyaalka 12 kulan oo ay ciyaartay.
Guddoomiyaha Degmada Heliwaa oo dib u habeyn ku sameeyay xarunta Degmada “SAWIRRO”
Guddoomiyaha Degmada Heliwaa oo dib u habeyn ku sameeyay xarunta Degmada "SAWIRRO"